Ubisoft CEO kwenyere na Nintendo NX ga-adị ndụ kacha mma | Akụkọ akụrụngwa
Nintendo esiwo n'agbụrụ maka mgbakọ ọgbọ nke ọgbọ ọzọ maka afọ ole na ole ugbu a, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Wii na Wii U nzọ bụcha ihe okike, o doro anya ịkọwa na ebe GameCube, Nintendo enweghị njikwa maka dakọtara na usoro nke eserese arụmọrụ. Wii U e atụlewo ọdịda site na Nintendo n'onwe ya, ka ọ dị ugbu a Sony na-aga n'ihu na-ere njikwa na Xbox opekata mpe na-akwado ụdị ahụ na ahịa nke Sony na Microsoft na-achịkwa ma a bịa na mgbakọ ụlọ. O sina dị, Onye isi oche nke Ubisoft ewepụtala usoro nkwupụta nke gbanwere ụwa nke egwuregwu vidio ụbọchị ndị a.
Yves Gullemot bụ onye isi oche nke Ubisoft hapụrụ okwu ndị a, o mesiri ike na Nintendo console ọhụrụ bụ isi ọgbaghara maka Nintendo n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Na nzukọ a mere na nso nso a, onye isi oche nke Ubisoft gosipụtara na ha na-arụ ọrụ na aha ọhụrụ maka njikwa Nintendo n'ọdịnihu, n'agbanyeghị na o kwughi ihe ọ bụla gbasara arụmọrụ ọ ga-enye. Ihe o kwuru ọnwa gara aga na ajụjụ ọnụ ọzọ bụ na Nintendo NX ga-adị mfe iji ma nye ọhụụ dị iche iche na-egwu egwuregwu karịa ihe anyị hụworo ugbu a.
Ọ dị egwu, ọ bụ n'ezie Nintendo, anyị hụrụ ya n'anya.
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ndị na-akọ akụkọ ka ha kọọ ụdị akụkọ a, ndị Nintendo gara aga ewepụtakwara ihe ngwaike, dịka ngwe ngagharị na Wii na Wii U remote / tablet. Anyị na-atụ Nintendo NX dị ka ohuru dị ka otu leaked Akwụsị Ọkụ, otu o sila dị ugbu a, anyị amatala nke ọma gbasara NES Classic wepụtara maka ọnwa na-abịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Ubisoft CEO kwenyere na Nintendo NX ga-atụle nke kacha mma
bq na emegharia uzo Aquaris U, onu ahia diri ndi nile